Abacre Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Point nke ire (naa) - Isi Akụkụ
Abacre Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Point nke ire
Abacre Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Point nke ire ere - Isi Akụkụ
Iru akara na nke a ọzọ ọgbọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ management software.
Download zuru-apụta 30-ụbọchị ikpe mbipute ( 7,24 MB)
Mụta ARPOS site na ị na-elele 5 nkeji mmekọrịta flash nkiri
Top 10 ihe ịzụta Abacre Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Point nke ire
N'Ezie mba software:
Abacre Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Point nke ire na ugbu a na-ere 75 mba.
Ọ na-akwado iche iche ụtụ isi ntọala na akwụkwọ ego formats. Ọ nwere ike na akpaaka jupụta ụtụ isi ntọala ọsọ mba na-ekwu / n'ógbè n'ógbè.
Ịnye interface dị na 11 asụsụ: Arabic, Bulgarian, Dutch, Bekee, French, German, Ịtali, Portuguese, Russian, Spanish na Turkey. Ọ bụ ọbụna ike mfe ịsụgharị software gaa n'asụsụ ndị ọzọ site mfe nsụgharị asụsụ ederede faịlụ .
Na-arụ ọrụ niile na-ebi akwụkwọ, ego úkwù na okporo osisi (akara ngosipụta) iji 3 ọzọ ụzọ:
OPOS ọkwọ ụgbọala (OPOS ọkwọ ụgbọala na-akwado niile isi ngwaike emepụta: IBM, EPSON, Samsung na Star Micronics na ndị ọzọ).
Windows ọkwọ ụgbọala.
Izipu kpọmkwem iwu site Com ọdụ ụgbọ mmiri
Enwekwukwa obi iru ala na-emegide wayo nchebe:
Database faịlụ na-ezoro ezo na paswọọdụ.
Nhazi faịlụ na-ezoro ezo.
Dị Iche Iche ọrụ: Admin, onye okwu ugwo, nkesa na, onyenchere nwaanyi, na onye nnabata dị iche iche na ohere ùgwù.
Dị Iche Iche nọchiri ihu nhọrọ, ka ihe atụ, ihe nkiri Wepụ Nkebi bọtịnụ; naanị admins nwere ike iwepụ ihe.
Enwekwukwa akwukwọ Interface:
Ohere ịhọrọ agba dị iche ihu gburugburu, grajentị bọtịnụ ma ogwe.
Full-apụta mebere keyboard na-arụ ọrụ na aka ákwà.
4 dị iche iche nke echiche n'ihi na menu ihe na edemede: bọtịnụ, ihe oyiyi, ndepụta na nkọwa.
Customization nke Akara ókwú na na agba.
Ọgwụgwụ nke Ụbọchị na z-si:
Tinye Malite ego nkịtị (na mgbasa ozi ọnụ dialog).
Kwe ego nkịtị drọwa ọrụ. Ọ bụ ike ịgụ bụghị naanị ego, kamakwa akwụkwọ ndenye ego na ndị ọzọ ozi. Ọ nwekwara ike kwe ego drọwa ọtụtụ ugboro n'oge a mgbidi.
Ọgwụgwụ nke Ụbọchị usoro na ohere ka ndabere data na mbupụ kwa ụbọchị data na-atọ ndị ọzọ yiri nkata software.
Z-si ego nkịtị drọwa na z-si oriri na ọṅụṅụ ndị fọrọ na-akọ.
Ọrụ si elekere Na na elekere si.
Dị Iche Iche nhọrọ, ihe atụ, na-akpaghị aka elekere na / elekere si na nbanye / logoff.
Ndenye nbanye iji Were n'Ọrụ Swipe Kaadị ma ọ bụ Were n'Ọrụ Barcode Kaadị.
Ọrụ oge akụkọ.
Atọ ndị yiri nkata:
Dara nha Nkezi, LIFO na FIFO atọ ndị yiri nkata ngụkọta oge ụzọ.
Mejupụtara menu ihe na họọrọ.
Ahụ yiri nkata ukpụhọde
Anata deekwa ego a kwụrụ.
Laghachi deekwa ego a kwụrụ.
Nwere ike na-arụ ọrụ na netwọk:
Ọ bụ ike kọwaa dị iche iche na netwọk akụkụ, ihe atụ, abụọ kọmputa maka ịbanye iwu, otu kọmputa n'ihi na onye okwu ugwo na otu kọmputa n'ihi na kichin.
Kwe ego drọwa iwu ga-emechi n'otu n'otu ọ bụla ego drọwa na njedebe nke Ụbọchị usoro ga-emechi niile ná mma workstations.
Omume na iwu:
Bipute Bill (elu ụgwọ customization, ka ihe atụ, ihe nkiri edemede; na-egosi free modifiers).
Bipute Ịma Ọkwa na kichin na mmanya.
Were Ịkwụ Ụgwọ (na-akwado ịbanye dị iche iche ịkwụ ụgwọ ụzọ n'otu oge n'ihi na otu onye ka).
Real-oge kaadị nhazi .
Nyefee iji ọzọ na tebụl.
Kee ka n'ime hà akụkụ.
Nkwụghachi ka (ọ bụ omume na nkwụghachi ihe iwu).
Ego (na ya nwere ike ime ka họrọ a ego si predefined ndepụta ego).
Kenye Client (nchekwa data nke ahịa kwa nọgidere na-enwe na ohere ịchọ ahịa, lee ahịa n'oge gara aga iwu).
Kenye nzipu Adreesị.
Kenye ihe modifiers (ihe atụ, mere nke ọma, ụkọ, tomato wdg).
Kenye ka si chit ọtụtụ ma ọ bụ ederede.
Ọzọ ka nhọrọ:
Iyo iwu site na ọnọdụ (oghe, mechiri, ná mma, na z-emechi).
Iyo iwu site ụbọchị.
Chọọnụ iwu site ahịa, onyenchere nwaanyi, onye okwu ugwo, tebụl ọtụtụ wdg
Omume na menu ihe:
Tinye ihe eji ụzọ dịgasị iche iche: site na ihe si koodu ma ọ bụ barcode, site na nhọrọ site na ndepụta nke ihe, site akpaka scanning iji barcode na-agụ (nyocha).
Detuo n'ihi na kichin.
Nhọrọ n'ihi ihe:
Enyere taxable na-abụghị taxable ihe. Ohere ịhọrọ onye ụtụ isi n'ihi na onye ọ bụla ihe.
Ohere iji gosi Họrọ onyenchere nwaanyi dialog n'ihi chọrọ ihe.
Ohere iji gosi Jụọ N'ihi na efu dialog n'ihi chọrọ ihe.
Uzommeputa n'ihi na kichin na mmanya.
Nkebi Foto / ngosi
Management nke flagged ihe.
Omume n'ihi na Kitchen / Baa echiche:
Mee ihe dị ka esighe.
Lee ihe si uzommeputa.
Email ziri ozi ka izipu ozi ịntanetị ka ahịa, mgbere ma ọ bụ ọrụ.
Ihụta set nke akụkọ:
Ahịa site na ụbọchị
Ahịa site izu
Ahịa site na ọnwa
Ahịa site na nkeji iri na ise
Ahịa site na afọ
Ahịa site awa
Ahịa site na ụbọchị izu
Ahịa site na tebụl
Ahịa site na edemede
Ahịa site na nhọrọ ihe
Ahịa site na ihe nkesa
Ahịa site onyenchere nwaanyi
Ahịa site onye nnabata
Ahịa site ahịa
Ahịa site ụzọ nkwụnye ụgwọ
Anakọta ụtụ isi ahịa ọrịre
Z-si ego nkịtị drọwa
Z-si oriri na ọṅụṅụ ndị fọrọ
Atụmatụ site na ihe nkesa
Atọ ndị yiri nkata
Atọ ndị yiri nkata Na Aka site na ihe
Atọ ndị yiri nkata Na Aka site Ndepụta Ngwaahịa Categories
Atọ ndị yiri nkata Na Aka site NchNhr Categories
Uru oke site na ihe
Uru oke site NchNhr Categories
"N'ihi na afọ anyị na-eji otu MS DOS ụlọ oriri na ọṅụṅụ naa usoro ruo mgbe anyị mesịrị chọta ezi Windows dabeere na dochie anya: Abacre Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Point nke ire. M tụnyere ya na ọtụtụ ndị ọzọ na programmụ na m kwụsịrị na ARPOS, n'ihi na ọ ọma-mere na ọma-ọnụ ahịa. N'ihi ya, anyị zụtara ihuenyo mmetụ Monitors, ọhụrụ kọmputa na ARPOS. The mgbanwe site ochie MS DOS usoro ndị ọhụrụ Windows dabeere na usoro bụ dị ịrịba ama: na ARPOS anyị na-eji ihe oyiyi n'ihi na menu ihe maka ngwa ngwa igodo, akụkọ ndị na-eju anya na ihe omume ahụ na ya onwe ya bụ nnọọ configurable na kemfe. Ebe ọ bụ na na oge m na a eziokwu akwado ARPOS na m nwere ike ikwu na ọ na-azụmahịa m enyi. "